Midori Browser - အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသော၊ မြန်ဆန်သော၊ Linux မှ
Midori Browser - အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသော၊ မြန်ဆန်သော၊
ဖေဖော်ဝါရီလမှ စ၍ ငါတို့ဘလော့ဂ်တွင်အချိန်အနည်းငယ်သာမှတ်ချက်ပေးသည့် application တစ်ခုဖြင့်စတင်ပါလိမ့်မည်။ အဲ့ဒါကိုခေါ်တယ် "Midori Browser"အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်အခြားနည်းလမ်းနှင့်အသုံးဝင်သည် web browser ကို ကြောင်းဖြစ်လျက်ရှိ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူမွေးဖွားခဲ့သည် အလင်း၊ အစာရှောင်ခြင်း၊အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ရှိသည်ဟု၎င်း၏ developer များကပြောကြားခဲ့သည်
"Midori Browser" ယခုအချိန်တွင်ခေါ်ယူထားသောအဖွဲ့အစည်းကတီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သောအခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည် « Astian Group » အရာအလှည့်တစ် ဦး ကပိုင်ဆိုင်သည် ဖောင်ဒေးရှင်း အမည်တူ၏ (အာရှ)အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်နည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်စုစုပေါင်း၏ privacy နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ပံ့ပိုးပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြန့်ကျက်ရန်ရည်ရွယ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။
Sidekick - ပိုမိုကောင်းမွန်သောအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအတွက် Web browser ။
ငါလက်ျာဘက်အပေါ်ခုန်မီ "Midori Browser" ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွင်းရှိကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းအမျိုးမျိုးတွင်ဘရောင်ဇာအမျိုးမျိုးရှိသည့်အရာများရှိသည်ဟုသင်သတိရသင့်သည်။ လိုအပ်ပါကရှာဖွေရန်နှင့်ဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, နောက်ဆုံး comment ခဲ့သည် နင်အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း၊
"Sidekick သည်ခရိုမီယမ်ဘရောက်ဇာကို အခြေခံ၍ အလုပ်လုပ်သောလည်ပတ်မှုစနစ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆုံးစွန်သောအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံဖြစ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင်၏အဖွဲ့နှင့်သင်အသုံးပြုသောဝဘ်ဆိုက်အားလုံးကို interface တစ်ခုတည်းတွင်အတူတကွပေါင်းစည်းသည်။" Sidekick - ပိုမိုကောင်းမွန်သောအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအတွက် Web browser
0.1 Web browser များ
1 Midori Browser - အခြားရွေးချယ်စရာ Web Browser
1.1 Midori Browser ဆိုတာဘာလဲ။
1.3 Midori နှင့်သက်ဆိုင်သောအခမဲ့၊ ပွင့်လင်းသောတိုးတက်မှုများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ
ကို GNU IceCat
Midori Browser - အခြားရွေးချယ်စရာ Web Browser
Midori Browser ဆိုတာဘာလဲ။
၎င်း၏အတွက်၎င်း၏ developer များအရသိရသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည် -
"Midori Browser သည်မွေးဖွားလာသည့် browser၊ အလင်း၊ အမြန်၊ လုံခြုံစိတ်ချရသောအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း (သို့) ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်းဆိုင်ရာကြော်ငြာများကိုမရောင်းချခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသူများ၏ privacy ကိုလေးစားသည်။ သင်၏အချက်အလက်များကိုအမည်ဝှက်ခြင်း၊".
လောလောဆယ်သူ့ရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ Linux အတွက်တည်ငြိမ်သော version 1.1.4 ထည့်သွင်းမှုနှင့်အတူ ".Deb format" y « AppImage format »။ သို့သော်၎င်းကိုမည်သည့်နေရာမှမဆိုတပ်ဆင်နိုင်သည် GNU / Linux Distros ရိုးရိုး command command ဖြင့်သင်၏ repositories မှတိုက်ရိုက်:
ငါ၏အအထူးသဖြင့်အမှု၌, ငါအဘယျသို့သုံးပါ MX Linux, ရရှိနိုင်ပါ install လုပ်ပြီးဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် ဗားရှင်းနံပါတ် 7.0.2.
ယင်း၏အကြား အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ငါတို့ပြောနိုင်သည်
ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံ: ၎င်းသည်မည်သည့် desktop စက်နှင့် Android စမတ်ဖုန်းတွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်ရန်စွမ်းရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် Linux, Windows, MacOS နှင့် Android အတွက် Installers နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်အမည်ဝှက်ခြင်းဖြေ - သုံးစွဲသူတွေရဲ့ privacy ကိုလေးစားတယ် « (Astian Group) » သူတို့ကသူတို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်စီးပွားဖြစ်ဖို့စိတ်ချပါနှင့်လည်းထိုးဖောက်ကြော်ငြာသို့မဟုတ်ပရိုဖိုင်းကိုအသုံးပြုသူများကိုရောင်းဖို့မကတိပေး။ ထို့အပြင် Midori Browser သည်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိစေရန်ပုံမှန်အားဖြင့် DuckDuckGO ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုသည်။
တိမ်တိုက်ထဲမှာထပ်တူပြုခြင်းနှင့်သိုလှောင်မှုဖြေ - အဆုံးမှအဆုံးသို့စာဝှက်စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးသုံးစွဲသူဒေတာအားလုံး၊ အချက်အလက်များ၊ သမိုင်း၊ သမိုင်းမှတ်တမ်း၊ အမှတ်အသားများ၊ စကားဝှက်များနှင့်အခြားအရာများထပ်တူကျအောင်အောင်မြင်အောင်ကိုယ်ပိုင်တီထွင်သူများရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတယ်။
Great Communityဖြေ - လက်ရှိ SL / CA စီမံကိန်းများကဲ့သို့ပင်ကြီးမားသောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီရန်ဆန္ဒရှိပြီး၊ စီမံကိန်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်ခြင်း၊ သွင်ပြင်လက္ခဏာအသစ်များပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ပြproblemsနာများကိုတည့်မတ်ပေးခြင်းနှင့်အခြားများစွာ
Midori နှင့်သက်ဆိုင်သောအခမဲ့၊ ပွင့်လင်းသောတိုးတက်မှုများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ
ယခုအဘို့, ၏ developer များ မီဒိုရီ စိတ်ဝင်စားဖို့ကမ်းလှမ်း အွန်လိုင်းဘာသာပြန်လုပ်ငန်း (ဘာသာပြန်), ဘာသာစကားများစွာသို့အလိုအလျှောက်ဘာသာပြန်ဆိုထားသော open source ။ အောက်ပါတို့ကိုနှိပ်ပါ link ကို.
မကြာခင်မှာပဲသူတို့ကတစ် ဦး ကိုလွှတ်ပါလိမ့်မယ် operating systemလွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည် GNU / Linux များ, ခေါ် Astians.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Midori Browser»တစ် ဦး ကအခြားရွေးချယ်စရာနှင့်အသုံးဝင်သော web browser ကို ကြောင်းဖြစ်လျက်ရှိ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူမွေးဖွားခဲ့သည် အလင်း၊ အစာရှောင်ခြင်း၊အခမဲ့ပြီးပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဆော့ဗ်ဝဲ၊ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Midori Browser - အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသော၊ မြန်ဆန်သော၊
ငါကြိုးစားခဲ့ပြီး၎င်းသည်အလင်းဖြစ်သည်မှန်သော်လည်းသူသည်အဓိကအားဖြင့် tabs များနှင့်၎င်းတို့အားစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်ပတ်သက်သော interface ကိုမကြိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်အလွန်လျှင်မြန်စွာမမြင်ရပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်မှာ ပြproblemsနာမရှိဘဲနှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းမပြုဘဲအသုံးပြုခြင်းကိုနှစ်သက်သည်
Octavio! သင်၏မှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Midori နှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံများကိုချန်ထားပါ။
LibreOffice New Generation သည်လူငယ်များပိုမို LibreOffice နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်အသိုင်းအဝိုင်းသို့ဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးပမ်းသည်
၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ - အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ